Tahiry rakitra PDF - pejy 11 amin'ny 11 - fototra afrikhepri
Zavamaniry manitra sy fanafody - karazany 700 (PDF)
Ny zava-maniry dia mifandray amin'ny lasa, ankehitriny ary ho avy. Ampifandraisintsika amin'ny sakafo, ny hanitry ny natiora, ny fitsaboana hafa, ny zaridaina milamina ary ...
Ny bokin'ny Tibetan'ny maty (PDF)
Ny Bardo Thödol dia midika hoe fanafahana amin'ny alàlan'ny fihainoana ireo fanjakana manelanelana ary avoaka amin'ny teny frantsay amin'ny alàlan'ny lohateny ny boky Tibetana ny maty dia lahatsoratra iray amin'ny Buddhisme Tibetan ...
Ny fiainana vaovao an'ny diaspora afrikanina mainty (PDF)
Ny fiainana vaovao an'ny diaspora afrikanina mainty.
Fahalalana tena - Shri Shankaracharya (PDF)
Shankaracharya no malaza indrindra tamin'ny mpaneho hevitra ao Vedanta. Ny filozofia dia manasongadina ny mombamomba an'i Brahma (Andriamanitra) sy Atma (fanahin'olombelona).
Ny Piramida Lehibe sy Atlantis - Edgar Cayce (PDF)
Ny mistery Lehibe any Ejipta dia mijanona ho mistery. Inona ny tsiambaratelon'ny fananganana azy? Ny fasan'i Farao ihany io? Inona ny tena fiaviany? Na oviana na oviana ...
Santiago, mpiandry ondry tanora dia nitady harena izay nalevina teo am-pototry ny piramida. Rehefa nihaona tamin'ny alimista tany an-tany efitra izy dia nampianatra azy hihaino ny fony, ho ...
Njinga Mbandi - Comic strip (PDF)
Njinga Mbandi, mpanjakavavin'i Ndongo sy Matamba, no nanamarika ny tantaran'ny Angola tamin'ny taonjato faha-17. Diplaomaty tsara, mpahay fifampiraharahana mahay ary mpanao tetikady matanjaka, Njinga dia nanohitra mafy ny tetikasa ...
Tantaran'ny ankapobeny ao Afrika - Vol 3 (PDF)
Ilay tantara dia miresaka momba ny tantaran'i Afrika hatramin'ny taonjato faha-7 ka hatramin'ny taonjato faha-11. Manomboka amin'ny fametrahana an'i Afrika eo amin'ny tantaran'ny tontolon'ny tantaran'ny taonjato faha-7 ny asa, avy eo ...
Ny Mpaminany - Khalil Gibran (PDF)
Miaraka amin'ny tononkalo sy ny fomba fiteny, i Khalil Gibran dia manambara ny hakanton'ny izao tontolo izao sy ny toetran'ny olombelona, ​​ny fototry ny zavatra mihoatra ny tsy fisehoan'izy ireo. Lalotra sy lalina, ...
Ilay tsiambaratelo taloha momba ny vonin'ny fiainana - Boky 2 (PDF)
Drunvalo Melchizédek dia nanohy ny fanolorany ny géometria masina sy ny angovo tsy manavaka izay mahatonga ny tontolontsika. Nambarany ny torolàlana momba ny fisaintsainana Mer-Ka-Ba, teknika fofonaina mandroso ...
Ny siansa goavambe - Rudolf Steiner (PDF)
Iray amin'ireo asa lehibe ara-panahy amin'ny taonjato faha-20. Steiner dia mamolavola fomba hentitra amin'ny zava-misy ara-panahy izay miery amin'ny fahatsapan-tena sy fahatsiarovan-tena mahazatra ...
Fanabeazana - Reny (PDF)
Page 11 ny 11 Avant 1 ... 10 11